I Belonged to You ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel April 22, 2017
" လူတစ်ယောက်ချစ်မိတဲ့အခါ အဲဒီလူကလွဲပြီး ဘာကိုမှမမြင်တတ်ကြတော့ဘူး "
DJ ချန်မိုဟာ သူ့ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရပြီးနောက် ပျက်ဆီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ငှက်ကလေးလို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေး သူ့ဘဝထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ် ...
ချန်မိုရဲ့သူငယ်ချင်းဝတုတ်ကတော့ သူ့တစ်ဘဝလုံးကိုပုံပြီး သူ့ချစ်သူကိုချစ်ခဲ့ပါတယ် ...
ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ချန်မိုရဲ့ညီလေး မော်ရှီဘ ကတော့ ရဲမေကလေး တစ်ယောက်ရဲ့အာရုံကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့သူပါ ...
ပေးဆပ်တဲ့အချစ် ... ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာအချစ် ... ဖြူစင်လှပတဲ့အချစ်တွေနဲ့ သူတို့ ...
ပုံသေသတ်မှတ်ထားလို့မရတဲ့ဘဝမှာ သူတို့အချစ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်သွားကြမှာလဲ ...?
အခြားသူတွေရဲ့ပြဿနာကိုအမြဲဖြေရှင်းပေးတတ်တဲ့ ချန်မိုရဲ့ ဘဝကို ငှက်ကလေးက ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးသွားမလဲ ...?
တို့ရဲ့ခမ်းနားလှပတဲ့အချစ်တွေကို ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ကြေကွဲဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ခံစားရမှာပါ ...
"I belong to you"ဟာ Chinese Romantic Drama Film တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ...
Zhang Jiajia ရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဝတ္ထုကို ဒါရိုက်တာZhang Yibai က ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ ...
Deng Chao , Yang Yang , Bai Baihe , Zhang Tianai ,Yue Yun Peng , Du Juan နဲ့ Liu Yan တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
Rating အရ IMDb မှာ 5.2/10 နှင့် MyDramaList မှာ 7.8/10 အသီးသီးရရှိထားပါတယ် ...
File Size - 593.1 MB
Ei Lay April 26, 2017 at 11:34 PM
attack on titan 1,2 lay tin pay par lar naw Please! :)